Isutikheyisi Engagungqiyo Ukudibana kunye ne-disassembly eyenzelwe ukugcina unobangela. Ngenkqubo ye-Envative hinge design eyilelweyo, iipesenti ezingama-70 zeendawo ezincitshisiweyo, akukho glue okanye rivet yokulungiswa, akukho ukuthunga kwe-lining yangaphakathi, eyenza kube lula ukulungiswa, kunye nokuthoba ipesenti ezingama-33 zevolumu yempahla, ekugqibeleni, yandise ipotimende. Umnqa wobomi. Onke amacandelo anokuthengwa ngokwahlukeneyo, ngokwenzela isuti yakho, okanye ezinye izinto endaweni yayo, akukho sutikheyisi iyabuya ukuze kulungiswe iziko elifunekayo, konga ixesha kunye nokunciphisa ukuthunyelwa kwekhabhoni ngonyawo.
Isitulo Sangaphandle Sensimbi
Isitulo Sangaphandle Sensimbi Ngexesha lama-60s, abaqulunqi bemibono baphuhlise ifenitshala yeplastiki yokuqala. Italente yabayili yoyilo kunye nokudityaniswa kwezinto kunye nokukhokelela kwinto ebalulekileyo. Zombini abaqulunqi kunye nabathengi baba likhoboka kuyo. Namhlanje, siyabazi ubungozi bayo bendalo. Okwangoku, iivenkile zokutyela zihlala zigcwalisiwe ngezitulo zeplastiki. Kungenxa yokuba intengiso ibonelela ngenye indlela. Umhlaba oyilo uhlala unabantu abaninzi nabavelisi befanitshala yentsimbi, ngamanye amaxesha ukuphinda ubhengeze uyilo ukusuka ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19… Ukuza ukuzalwa kukaTomeo: isitulo sentsimbi, esikhanyayo nesisimiselweyo.
Indawo Yobugcisa Obu bugcisa, obuqhelekileyo kunye nokuthengiswa konke kudityaniswa kwindawo enye. Ukusukela uyilo olungumzi-mveliso wecandelo lendawo yokuhambisa izixhobo Isakhiwo sonke sigcina ukuthungwa kodonga Umhombiso onzima kakhulu wase-Abandon, wasebenzisa umhombiso ofudumeleyo womboniso owadala imvakalelo yokuphumla. Umahluko phakathi kwendalo kunye nenqanaba lokuqala libhetyebhetye ngakumbi ukuze kuphuculwe indawo kwixesha elizayo.
Uphawu Lophawu Ukwenza uyilo lohlobo lwebhongo, iqela lisebenzise isifundo sabaphulaphuli ekujolise kubo ngeendlela ezininzi. Xa iqela lenza uyilo lophawu kunye nesazisi somdibaniso, ithathe ingqalelo kwimithetho ye-psycho-geometry -impembelelo yeefom zejometri kwiindidi ezithile zengqondo zabantu kunye nokuzikhethela kwabo. Kwakhona uyilo lufanele ukuba lubangele iimvakalelo ezithile phakathi kwabaphulaphuli. Ukufikelela kwisiphumo esifunekayo, iqela lisebenzise imigaqo yesiphumo sombala emntwini. ngokubanzi, isiphumo sibe nefuthe kuyilo lwazo zonke iimveliso zenkampani.
Iziko Lokuthengisa Isitayile saseTshayina kweli tyala samkela ilitye elimnyama lekofu ebomvu emarikeni kunye nokungabikho kokukhanya kwendalo kwifestile yomgangatho, kusenza umahluko phakathi kokukhanya kunye nomthunzi, ocacileyo nowokwenene. I-grilles zeenkuni kunye ne-aluminium ezenziwe ngomthi, amacwecwe obhedu obugqabi obunamaqhekeza kwindawo ebabazekayo bamanzi, kunye nobugcisa bokufakelwa kwesixhobo saseTshayina kwindawo yokuphumla yindawo ethi & quot; inkundla ye-orchid inkundla & quot; icala Ngokukodwa, ukusetyenziswa kwezixhobo ezitsha zeengxinano, kwindawo eqaqambisa ukuqaqambisa, kodwa kwakhona ngobuchule kunciphise iindleko zomhlaba.
Igumbi Lokuhlambela Igumbi Lokulala
Igumbi Lokuhlambela Igumbi Lokulala Ukwahlula phakathi kwendawo yesiqhelo yomboniso, sichaza le ndawo njengemvelaphi enokubangela ubuhle bempahla. Ngale ngcaciso, sifuna ukwenza inqanaba lexesha lokuba impahla inokuziqaqambisa ngasese. Kananjalo senza isiseko sexesha ukubonisa imveliso nganye ebonakalisiweyo kwesi sithuba senziwe kwixesha elahlukileyo.
Ane Isitulo Thursday 2 December
Fluid Cube and Snake Ifanitshala Elungileyo Wednesday 1 December
Bubble Forest Umfanekiso Oqingqiweyo Luluntu Tuesday 30 November
Isutikheyisi Engagungqiyo Isitulo Sangaphandle Sensimbi Indawo Yobugcisa Uphawu Lophawu Iziko Lokuthengisa Igumbi Lokuhlambela Igumbi Lokulala